Qatar Airways Cargo wepụtara ọrụ raara nye Yangon
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Qatar Airways Cargo wepụtara ọrụ raara nye Yangon
A na-eje ozi ụzọ Doha-Yangon-Doha otu ugboro n'izu na ụgbọ elu Airbus A330, na-enye ihe karịrị tọn 60 nke ibu ibu n'ụzọ ọ bụla.
Qatar Airways Cargo amalitela ọrụ ụgbọ mmiri na-aga Yangon, Myanmar. A na-eje ozi ụzọ Doha-Yangon-Doha otu ugboro n'izu na ụgbọ elu Airbus A330, na-enye ihe karịrị tọn 60 nke ibu ibu n'ụzọ ọ bụla.
Onye isi ndị ọrụ ụgbọ njem Qatar Airways Cargo, Maazị Guillaume Halleux kwuru, sị: “Obi dị anyị ụtọ ịmalite njem ụgbọ mmiri anyị nke asatọ maka afọ 2017, n’usoro mgbasawanye nke usoro anyị na ntanetị na ụgbọ mmiri anyị. Kemgbe nnwere onwe nke mba ahụ, Myanmar nwere akụ na ụba na-eto eto na mpaghara ASEAN, na itinye ego mba ọzọ na azụmaahịa mpaghara ahụwo nnukwu mmụba. Obi dị anyị ezigbo ụtọ na anyị bụ ụgbọ elu ụgbọ elu nke mba ụwa mbụ iji jee ozi ahịa a na-arụ ọrụ nke ga-ebu ibu ka anyị na-achọ ịbụ onye na-eweta ọrụ ikuku nke ikuku na mpaghara ahụ.
Mbupu ụgbọ mmiri nke Myanmar na mbubata ịrị elu ịrị elu nke 87 pasent na 58 pasent na metric tọn kemgbe 2014. Qatar Airways Cargo na-enye ugbu a ikike afọ na ụgbọ elu ndị njem ụgbọ elu kwa ụbọchị na Yangon. Mgbakwunye nke ọrụ a raara onwe ya nye ga-enye ikike ọzọ iji kwado mbupụ uwe Myanmar, yana nnukwu ngwaahịa ndị ọzọ, gụnyere ngwaahịa na ngwaahịa. Uwe ndị ejikere bụ isi ndị na-ebupụ isi na Europe na United States site na nkwụsị na-enweghị ntụpọ na ọdụ ụgbọ mmiri Doha. Ọrụ ọhụrụ a ga-emekwa ka njem nke ọgwụ na-ebubata site na Europe gaa Myanmar site na ngwọta QR Pharma ya.
Asia Pacific bụ ahịa ụgbọ elu kachasị elu maka Qatar Airways Cargo, yana mwepụta nke ọrụ ụgbọ mmiri ọhụrụ na Yangon, ndị na-ebu ngwongwo emeela ka netwọkụ ya na mpaghara ahụ gaa ebe asatọ. Qatar Airways Cargo na-enyekwa ikike afọ 29 dị ukwuu na mpaghara ahụ, na-enye ngụkọta izu kwa izu nke ihe karịrị tọn 8,000 site na Asia Pacific. N'oge na-adịbeghị anya, ụgbọ mmiri ahụ na-ebu ngwongwo malitere ọrụ ụgbọ mmiri na Pittsburgh, na-aghọ ụgbọ elu ụgbọelu mbụ nke mba ụwa iji nye ndị ọrụ ụgbọ mmiri raara onwe ha nye n'obodo ahụ.
Qatar Airways Cargo nabatara Boeing 747-8F nke mbụ ya na nke iri na atọ Boeing 777F dị ka akụkụ nke atụmatụ mgbasawanye atụmatụ iji nye ndị ahịa ya ndokwa na ndị na-ebu ụgbọ mmiri na-eji ụgbọ mmiri na-eto eto na nke oge a. Onye na-ebu ngwongwo a na-enyekwa ngwaahịa ndị dị iche iche dịka QR Pharma, QR Fresh, QR Live na QR Express maka arụmọrụ na nrube isi na njikwa ọgwụ na-emebi ngwa ngwa na mbibi na-emebi emebi, njem nke anụmanụ dị ndụ yana mbupu dị oke mkpa.
N'oge na-adịbeghị anya, ndị na-ebu ngwongwo nwetara onyinye abụọ na Eshia: onyinye 'Payment Asia Carrier of the Year' nke Payload Asia na 'Best Cargo Airline in Customer Services' nke India Cargo Awards.
Wyndham Hotel Group weputara ihe omuma ohuru nke ohuru na Miami
Qatar Airways na-aga n'ihu na mgbasawanye na Europe na Russia
Greyhound Canada kwụsịrị ọrụ niile na Canada